Nhau - Kukosha Kwekupakata
Chigadzirwa Kuisa chinotumirwa kumakatoni, mabhokisi, mabhegi, blister, kuisa, zvitambi uye zvinyorwa nezvimwe.
Chigadzirwa Kuvavha kunogona kupa chengetedzo yakakodzera kudzivirira zvigadzirwa kubva mukukuvadzwa panguva yekufambisa, yekuchengetedza uye yekutengesa maitiro.
Kunze kwebasa rekudzivirira, kurongedza kwechigadzirwa zvakare kunoita basa rakakosha mukushongedza chigadzirwa, kusimudzira chiratidzo, kusangana nevatengi 'zvekushongedza zvido uye zvepfungwa zvinoda pakupedzisira zvinowedzera kutengesa kufambira mberi.
Chigadzirwa kurongedza chiitiko chinoonekwa chechigadzirwa; Mutauri wezvigadzirwa zvigadzirwa; Iyo mharidzo yemufananidzo wekambani uye chinzvimbo.
Yakanyatsogadzirwa chigadzirwa kurongedza inzira yakakosha yekuita iyo purofiti kune bhizinesi. Kurongeka kwakarongeka kwekumisikidza uye kunoenderana nevatengi psychology kurongedza dhizaini kunogona kubatsira iro bhizinesi kumira muboka revakwikwidzi 'mabhenji uye kuhwina mukurumbira wakanaka.
Mitemo yaDuPont inonongedza kuti 63% yevatengi vakaita sarudzo dzavo dzekutenga zvinoenderana neyakagadzirwa chigadzirwa. Nekuda kweizvi, hupfumi hwemusika mazuva ano zvakare hunowanzo kunzi kutarisa hupfumi. Chete chiratidzo chinobata maziso uye kurongedza ndiko kunogona kucherechedzwa nekutambirwa nemutengi uye kushandurwa kuve kutengesa.
Naizvozvo, ese emabhizinesi anofanirwa kubhadhara yakanyanya kutarisisa kune iyo yekuisa basa mune yekumaka
Chigadzirwa chega chega chine kurongedza kwaro kwakasarudzika, uye makuru ma brand haatombo chengetedza mari mukugadzira iyo yakakwana kurongedza kwezvinhu zvayo.
Zviripachena, kurongedza kwakakosha kwazvo kune zvigadzirwa:
Kupakata Rudzi Rwekutengesa Simba.
Nhasi, iwo Musika uzere nezvakasiyana zvigadzirwa, kutariswa kwechigadzirwa chimwe nechimwe chakapfupika, uye kurongedza kunofanira kubata uye kubata mutengi pavanokanda zvishoma pamasherufu. Chete kurongedza kwakanyatsoshandisa iyo Dhizaini, Ruvara, Rakaumbwa, Chinyorwa kumiririra ruzivo rweChigadzirwa, Brand uye Kambani Chirevo uye Tsika, zvinogona kukwezva mutengi uye kupa mutengi chiratidzo chakanaka cheichi chigadzirwa uye mhando, zvo tungamira kune chiito chekutenga. .
Kupakira isimba rekutengesa iro rinotora iro rekutanga basa rekukwezva vatengi.
Kavha Rudzi Rwekuzivikanwa Simba.
Kana iko kurongedza kuchinge kwabudirira kukwezva mutengi uye kubata kwavo kutarisisa, kurongedza ipapo kunofanirwa kuve nebasa rekuburitsa chigadzirwa gadziriso uye maficha.
Iko kurongedza kwechigadzirwa hakudi chete chitarisiko chakagadzirwa zvakanaka asi zvakare chinogona kutaura nezvechigadzirwa.
Kuita kwemusika wechigadzirwa kunoenderana nekuti wakanaka sei kurongedza kunopa zvigadzirwa zvigadzirwa uye ruzivo rwakadzama.
Kavha NdeMhando YeBranding Simba.
Kavha ine Kushambadzira uye Branding basa. Ndokureva, kurongedza kunogona kuratidza ruzivo rwechiratidzo; kuvaka chitupa chiratidzo uye rega mutengi anzwisise Brand Zita, Brand chivakwa, nekudaro gadzira hachizi mufananidzo.
Mune iyo yekumaka yekuvakisa, kurongedza zvakare kunogona kurapwa seimwe yeBrand Image sosi.
Kupakira sechiratidziro chekunze chakakosha cheichi chigadzirwa, chinoisa mutoro wekunzwa kuti bhizinesi rinoda kupa kumutengi.
Kupakata ibasa rakakura mukusiyanisa kwechigadzirwa. Iyo inogona kugadzira iyo mhando ficha uye neiyi vatengi vanokwezva uye kutengesa kunoitwa.
Kupakira Rudzi Rwetsika Simba.
Mwoyo wekupakata haungorarame mukutaridzika kwekunze uye chimiro, asi zvakare unovaka kubva mukubatanidzwa kwehunhu hwemunhu uye hunhu hunodakadza.
Kavha inogona kuratidza chigadzirwa uye bhizinesi Tsika zvinobudirira
Kupakata Rudzi Rwehukama Simba.
Chigadzirwa Kupakata chakatemerwa Vatengi, inogona kusangana nezvinodiwa zvakasiyana nevatengi, ukuwo ichiunza simba rehukama kune vatengi.
Zvese mune zvese, kurongedza kwakapihwa nekuwedzera uye nekuwedzera mabasa.
Kupakata kunotora chinonyanya kukosha basa rekushambadzira nekumaka.